နေခြည်သွေးသစ်: မင်္ဂလာရောင်ခြည်-ဗုဒ္ဓ၀င်ရုပ်စုံ [အခန်းစဉ် ၁၈၊ ၁၉၊ ၂၀၊ ၂၁]
မင်္ဂလာရောင်ခြည်-ဗုဒ္ဓ၀င်ရုပ်စုံ [အခန်းစဉ် ၁၈၊ ၁၉၊ ၂၀၊ ၂၁]
၁၈။ ပဉ္စ၀ဂ္ဂီ ငါးဦး
ဘုရားလောင်းသည် ဥရုဝေလတောသို့ ရောက်သောအခါ ထိုတောမှာပင်နေ၍ ဒုက္ကရစရိယာအကျင့်ကို ကျင့်သည်။
မကြာမီ ပရိဗိုဇ်ရဟန်းငါးပါး ရောက်လာကြသည်။ သူတို့မှာ ရှင်ကောဏ္ဍည၊ ရှင်ဝပ္ပ၊ ရှင်ဘဒ္ဒိယ၊ ရှင်မဟာနာမ်၊ ရှင်အဿဇိတို့ ဖြစ်ကြသည်။ (ရှင်ကောဏ္ဍညမှာ ဘုရားလောင်း ဖွားမြင်စက လက္ခဏာဖတ်ကြသော ပုဏ္ဏားရှစ်ယောက်အနက် 'မုချဘုရားဖြစ်လိမ့်မည်' ဟုဟောခဲ့သော ပုဏ္ဏားငယ်ဖြစ်သည်။ ပရိဗိုဇ်လေးဦးမှာ ကျန်လက္ခဏာဖတ် ပုဏ္ဏားများ၏ သားများ ဖြစ်ကြသည်။)
သူတို့သည် ဘုရားလောင်းတောထွက်ကြောင်း ကြားသဖြင့် လိုက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့နောက် ၀တ်ကြီးဝတ်ငယ် ပြုစုနေကြသည်။
18. Groups of five (hermits).
Bodhisat arrived at Uruvela forest and residing there practised arduous practices. Not long after, five hermits viz; Reverend Kondannya, Vappa, Bhaddiya, Mahanama and Assaji came to the Bodhisat. (Rev. Kondannya was the young brahmin out of the eight brahmins who foretold the future of Bodhisat, and he was the one who foretold the future of Bodhisat to become Buddha certainly. The remaining four hermits were the sons of other future telling brahmins.)
Hearing the retirement of Bodhisat they came after him and stayed administering filial duties of the Bodhisat.
ဘုရားလောင်းသည် အစာအဟာရကို တစတစဖြတ်ကာ ပြင်းထန်စွာ တရားကျင့် သည်။ ထိုအခါ စိုပြေ၀င်းဝါသော အဆင်းတော်သည် ညိုမည်းခြောက်သွေ့လာသည်။ အရိုးနှင့်အရေသာ ကျန်တော့သည်။
တနေ့တွင် အားပြတ်ကာ မိန်းမော၍ လဲကျသွားရှာသည်။
ပြန်လည်သတိရသော် နေရာမှထကာ မိမိအဖြစ်ကို ဆင်ခြင်သုံးသပ်ကြည့်သည်။
"ခြောက်နှစ်ကြာမျှ ကျင့်ခဲ့သော ဒုက္ကရစရိယာအကျင့်ဖြင့် တရားထူး ရနိုင်မည်မဟုတ်"
19. Arduous practice (dukkara cariya).
Bodhisat diminished partaking of the food bit by bit and practised vigorously. Thereupon golden complexion of Bodhisat became dried and dark. Only bones and skin remained.
One day He became very weak and fell down inaswoon. After regaining consciousness He got up and pondered over His condition "Practising the arduous practice for six years is not capable to obtain the noble truth (dhamma)."
ဘုရားလောင်းသည် အလျော့အတင်းမရှိ တရားအားထုတ်နိုင်ရန် ဆွမ်းအဟာရများကို ပြန်မှီဝဲသည်။ ထိုအခါ ပဉ္စ၀ဂ္ဂီငါးဦးတို့သည်-
"သိဒ္ဓတ္ထကား တရားအားထုတ်မှု လျော့ပါးသွားချေပြီ" ဟု ဆိုကြသည်။ ဘုရားလောင်း ကို စွန့်ခွါ၍ မိဂဒါဝုန်တောသို့ ပြောင်းသွားကြသည်။
ဘုရားလောင်းသည် ကိုယ်ခန္ဓာတောင့်တင်းလာသောအခါ 'မဇ္ဈိမပဋိပဒါ' ဟူသော အလယ်အလတ်လမ်းဖြင့် သမာဓိနှင့် ၀ိရိယကို မျှတအောင်ပြု၍ တရားအားထုတ်သည်။
20. Middle Path
To enable to practise moderately Bodhisat began to partake the meals again. Then Group of five hermits saying "Siddhattha has lessened the practices" forsook him and went to Migadaya forest. Bodhist becoming stout and healthy practised by means of the middle way keeping energy and concentration (of the mind) evenly.
၂၁။ သုဇာတာ ဃနာနို့ဆွမ်း
ထို့နောက် ကဆုန်လပြည့်နေ့ နံနက်စောစောတွင် ညောင်ပင်အောက်၌ ထိုင်နေတော် မူသည်။ ထိုစဉ် သူဌေးသမီး သုဇာတာက မိမိကို သားဆုပေးသော ကျေးဇူးရှင်နတ်မင်းဟု မှတ်ထင်လျက် ရွှေခွက်ဖြင့် ထည့်ထားသော နို့ဃနာဆွမ်းကို ကပ်လှူသည်။
ဘုရားလောင်းသည် ထိုဆွမ်းကို နေရဉ္စရာမြစ်ကမ်း၌ ဘုဉ်းပေးတော် မူသည်။ ထို့နောက်- "ငါသည် ယနေ့ ဘုရားဖြစ်မည်မှန်ပါက ဤရွှေခွက်သည် ရေညာသို့ ဆန်ပါစေသား" ဟုဆိုကာ မျှောလိုက်သည်။ ရွှေခွက်သည် ရေညာသို့ ဆန်တက်သွားလေသည်။
21. Milk broth of Sujata.
On the full moon day of the month Kason, early in the morning Bodhisat sat under the banyan tree. Therein, the rich man's daughter Sujata thinking the Bodhisat to be the benefactor god who bestowed her withason, offered milk broth to Him.
Bodhisat partook that meal' on the bank of river Neranjara. Then saying, "If it is true that I will become the Enlightened One this very day, may this golden bowl go against the stream." He sat it adrift in the stream. The golden bowl against the stream (up stream).
Posted by Maung Aye Win at 10:55 PM